Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Teknụzụ ụgbọ elu NASA iji chekwaa oge maka ndị njem ọdụ ụgbọ elu
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Safety • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Nkà na ụzụ nhazi oge ụgbọ elu nke NASA mebere ga-emeziwanye ntụkwasị obi maka ndị njem n'oge adịghị anya.
Onye nchịkwa NASA Bill Nelson gara Orlando International Airport dị na Florida Wenezde wee zute ndị isi ụgbọ elu iji kparịta imejuputa teknụzụ nhazi oge ụgbọ elu nke ụlọ ọrụ ahụ mepụtara nke ga-emeziwanye ntụkwasị obi maka ndị njem n'oge na-adịghị anya - nke dị mkpa karịsịa n'oge njem kachasị elu dị ka ezumike Ekele.
Na Septemba, teknụzụ a nwalere n'oge NASAEbufere ihe ngosi teknụzụ ikuku ikuku 2 (ATD-2) na ndị Nchịkwa Federal Aviation (FAA). Nnukwu ọdụ ụgbọ elu gafee mba ahụ - gụnyere Orlando International - ga-emejuputa teknụzụ n'oge na-adịghị anya. Nelson kwurịtara maka mbufe teknụzụ ya na onye isi ala Orlando Aviation Authority Phil Brown.
"NASA's mmekorita na FAA na-ebuga ndị America mgbe niile, na-emeziwanye arụmọrụ nke ụlọ ọrụ ụgbọ elu azụmahịa maka gburugburu ebe obibi na ndị njem n'ofe mba ahụ, "Nelson kwuru. "Nkà na ụzụ nhazi oge ụgbọ elu anyị, nke na-eme ka ndị ọrụ nwee ike ịhazigharị mmegharị nke ụgbọ elu mgbe ha nọ n'ọdụ ụgbọ elu, ga-enyere aka hụ na ọtụtụ ndị njem si n'ala na ụlọ maka ezumike ngwa ngwa na nke ọma karịa mgbe ọ bụla ọzọ. ”
NASA na FAA Emechara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ anọ nke nyocha ọrụ elu na nyocha iji gbakọọ ihe ndọghachi azụ nke ọnụ ụzọ ámá site na nha dabere na oge na ọdụ ụgbọ elu ndị na-arụsi ọrụ ike, ka ụgbọ elu nwee ike tụgharịa ozugbo na runway iji pụọ ma zere tagzi gabigara ókè na ijide oge, na-ebelata iji mmanụ ọkụ, ikuku, na ndị njem na-egbu oge.
“Ka anyị na-ebuga ngwanro a, ahụmịhe njem na-akawanye mma maka ndị njem ka ikuku ụgbọ elu na-ebelata. Ọ bụ mmeri,” kwuru FAA Onye nchịkwa Steve Dickson. "NASA ka bụ onye mmekọ dị oke mkpa na mbọ FAA iji wulite usoro ụgbọ elu na-adigide."
FAA na-ezube ibuga teknụzụ nyocha ihu elu nke NASA na mbụ gaa na ọdụ ụgbọ elu 27, gụnyere Orlando International, dịka akụkụ nke itinye ego buru ibu na teknụzụ njikwa elu ọdụ ụgbọ elu akpọrọ Terminal Flight Data Manager (TFDM). Ọganihu dị mma na oge nchere ọpụpụ ọpụpụ site na taxi ụzọ gaa n'ọnụ ụzọ ámá na-echekwa mmanụ ọkụ, na-ebelata ikuku, ma na-enye ndị ụgbọ elu na ndị njem mgbanwe mgbanwe n'ime oge tupu ha apụ n'ọnụ ụzọ.
Brown kwuru, "Mbugharị a na-atụ anya ya nke TFDM emelitere na 2023 dabara na amụma anyị maka ịlaghachi na okporo ụzọ ndị njem tupu ọrịa ọgbaghara n'otu afọ," Brown kwuru. "Mmelite ndị a kwesịrị ịkpata ahụmịhe dị nro maka ọha na-eme njem ma kwalite 'ahụmahụ Orlando' anyị na-agba mbọ ịnye kwa ụbọchị n'ọdụ ụgbọ elu ụwa anyị."
Ndị otu NASA ATD-2 buru ụzọ tinye teknụzụ nhazi oge ụgbọ elu ha na ndị ọrụ ụwa na Septemba 2017 na ọdụ ụgbọ elu International Charlotte-Douglas. Ka ọ na-erule Septemba 2021, ngwa ọrụ mbata na ọpụpụ (IADS) agbakwunyere echekwala ihe karịrị otu nde galọn mmanụ ụgbọ elu. Emebere ego ndị ahụ site n'ibelata oge ịgba ọsọ ụgbọ elu jet, nke na-ebelatakwa ụgwọ ọrụ nlekọta yana ndị ụgbọ elu echekwara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde $1 na ọnụ ahịa ndị ọrụ ụgbọ elu. N'ozuzu, a zọpụtara ndị njem awa 1.4 na igbu oge ụgbọ elu wee chekwaa ihe ruru nde $933 na uru oge.
Otu onye ọrụ nwụrụ, atọ n'ụlọ ọgwụ n'ihe mberede ụlọ ọrụ nuklia Spain